သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းကြားကြားခြင်းမှာ မယုံနိုင်လောက်အောင်တော်တော်ခံစားနေရရှာတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင် – Cele Snap
သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းကြားကြားခြင်းမှာ မယုံနိုင်လောက်အောင်တော်တော်ခံစားနေရရှာတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်
July 10, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိတျသတျကွီးရေ….ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ မငျးသားခြောညီထှဋျခေါငျဟာဆိုရငျ ရုပျရှငျနဲ့ဗီဒီယိုဇာတျကားပေါငျးမြားစှာကိုရိုကျကူးထားပွီးပရိတျသတျတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကိုတဈခဲနကျရရှိထားတဲ့မငျးသားတဈလကျပဲဖွဈပါတယျနျော.။ညီထှဋျခေါငျဟာဆိုရငျလတျတလောဖွဈပျေါနတေဲ့နိုငျငံရေးအခွအေနတှေမှောဆိုရငျလညျး ပွညျသူလူထုနဲ့အတူတဈသားတညျးရပျတညျခဲ့တာဖွဈပွီး လူထုလှုပျရှားမှုမှာတကျကွှစှာပါဝငျခဲ့တာကွောငျ့ ပုဒျမ ၅၀၅(က)နဲ့ဖမျးဝရမျးထုတျခံထားခဲ့ ရတာပဲဖွဈပါတယျ.။
အဲ့ဒီလိုဝရမျးထုတျခံခဲ့ရလို့ လကျရှိမှာထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေတာပဲဖွဈပါတယျနျော.။ဒီကနမှေ့ာဆိုရငျလညျး ဝရမျးပွေးဘဝဖွဈနတေဲ့ ညီထှဋျခေါငျရဲ့ခဈြသူကောငျမလေးဟာ ဇူလိုငျ (၁ဝ ) ရကျနတှေ့ငျနှလုံးရပျပွီးနအေိမျ၌ကှယျလှနျသှားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ. ။ခဈြသူကောငျမလေးကှယျလှနျသှားပီဆိုတဲ့သတငျးကိုကွားကွားခငျြးမှာပဲ မယုံနိုငျလောကျအောငျစှနျ့အခဲ့ရတာပဲဖွဈပါတယျနျော.။
ခဈြသူဆုံးပါသှားလို့ရငျနဲ့မဆနျ့အောငျခံစားနရေတဲ့ညီထှဋျခေါငျဟာ ” မေ မကေတကယျမရှိတော့တာလားဟငျ 😭” ဆိုပွီးမယုံနိုငျလောကျအောငျခံစားနရေတာပဲဖွဈပါတယျနျော။ပရိတျသတျကွီးလညျး ညီထှဋျခေါငျအတှကျအားပေးစကားလေးပွောခဲ့ပါအုံးနျော။ဖတျရှုပေးတဲ့ Celebrity Platforms ပရိတျသတျကွီးကိုအထူးပဲ ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားချောညီထွဋ်ခေါင်ဟာဆိုရင် ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးထားပြီးပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုတစ်ခဲနက်ရရှိထားတဲ့မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ညီထွဋ်ခေါင်ဟာဆိုရင်လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမှာဆိုရင်လည်း ပြည်သူလူထုနဲ့အတူတစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(က)နဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားခဲ့ရ တာပဲဖြစ်ပါတယ်.။
အဲ့ဒီလိုဝရမ်းထုတ်ခံခဲ့ရလို့ လက်ရှိမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်း ဝရမ်းပြေးဘဝဖြစ်နေတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးဟာ ဇူလိုင် (၁ဝ ) ရက်နေ့တွင်နှလုံးရပ်ပြီးနေအိမ်၌ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်. ။ချစ်သူကောင်မလေးကွယ်လွန်သွားပီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားကြားချင်းမှာပဲမယုံနိုင်လောက်အောင်စွန့်အ ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
ချစ်သူဆုံးပါသွားလို့ရင်နဲ့မဆန့်အောင်ခံစားနေရတဲ့ညီထွဋ်ခေါင်ဟာ ” မေ မေကတကယ်မရှိတော့တာလားဟင် 😭” ဆိုပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်ခံစားနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း ညီထွဋ်ခေါင်အတွက်အားပေးစကားလေးပြောခဲ့ပါအုံးနော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Celebrity Platforms ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ်။
လက်ရှိကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရင်း ကိုဗစ်ကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်